सरकारले दियो पिपिई बनाउने जिम्मा महावीर पुनलाई::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
सरकारले दियो पिपिई बनाउने जिम्मा महावीर पुनलाई
काठमाडाैँ– नेपाल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै लामो समयदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीप्मेन्ट (पीपीई)को व्यवस्था गर्न नेपाललाई आग्रह गर्दै आइरहेको थियो।
तर नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुरालाई वेवास्ता गर्दै नेपालमा भाइरसको संक्रमण फैलिने अवस्थामा पुग्दासम्म पनि पीपीईको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन।
भरपर्दो सुरक्षा सामाग्री नहुँदा चिकित्सकहरु ज्यान जोखिममा राख्दै संक्रमितको उपचारका खटिरहेका छन्। चिकित्सकलाई मात्र नभई बिरामीको उपचारका खटिने नर्स, स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेसन वार्डमा रहेका सबैले पीपीई लगाउन अनिवार्य छ। तर यही अनिवार्य लगाउनु पर्ने सामाग्री सरकारले जुटाउन सकिरहेको छैन।
यो आपत्‌को घडीमा महावीर पुनकाे राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पीपीई बनाउने भएकाे छ। चैत ११ गते शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट पीपीई बनाइदिन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संयोजक पुनलाई आग्रह गरेको थिए। पुनले सोही दिनबाट काम सुरु गरे।
बुधबार पीपीईको पहिलो चरणको नमुना तयार भयो। तयार परिएको नमुनाको परीक्षण नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालको टोलीले गर्‍यो। डा. कोइराला पछिल्लो समय सरकारले गठन गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्य समेत हुन्।
पीपीईको परीक्षणपछि मापदण्ड अनुरुप नै भएकाे भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पुनलाई पीपीई बनाउन स्वीकृति दियो।
काउन्सिलले स्वीकृत दिएसँगै बिहीबारबाटै पीपीई सिलाउने काम सुरु गरिएको पुनले बताए। उनले भने,‘हामी दुई ठाउँबाट काम गरिहेका छौँ, एउटा चप्पल कारखाना र अर्को पेप्सीकोलाबाट। यसका लागि हामीले १५ सय मिटर जस्तो मेटेरिइल पाएका छौँ। जुन आजैबाट बनाउन सुरु गरिएको छ।’
गार्मेन्ट कम्पनी तयार गरेपनि कालीगढ नपाउने समस्या भइरहेको उनले बताए। ‘एक जना कालीगढले एक दिनमा ७/८ वटा बनाउन सक्ने रहेछन्। तर धेरै जसो कालीगढ अहिले उपत्यका बाहिर छन्। अहिले हामीसँग जति छन् तिनैले बनाइरहेका छन्’, उनले भने।